बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिदकाे उच्चस्तरीय भेटवार्ता आज, क-कसलाई भेट्दैछन् ? « News24 : Premium News Channel
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिदकाे उच्चस्तरीय भेटवार्ता आज, क-कसलाई भेट्दैछन् ?
काठमाडौँ, २७ कात्तिक । जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारबीच आज बुधबार भेट वार्ता हुँदै छ । अपराह्न ४ः३० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्मको भेटवर्तामा आपसी हितका विषयमा छलफल हुने छ ।
आज राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षीको स्वागतमा रात्रिभोज आयोजना गर्नुहुने कार्यक्रम छ । रात्रिभोजअघि अपराह्न ३ः१५ बजे उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, २ः४० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, २ः०० बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति हमिदसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने छ ।
बिहान ११ः१० बजे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बिहान १०ः५० बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उहाँसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने तय भएको छ ।
राष्ट्रपति हमिदसँग मङ्गलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । शिष्टाचार भेटमा दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिदले नेपालको न्यानो स्वागतका लागि नेपाली जनता र सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति हमिद मङ्गलबार नेपालको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा आउनुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपालको चारदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएको हो । राष्ट्रपति हमिदसँग उहाँकी पत्नी रसिदा हमिद पनि हुनुहुन्छ ।
गफ हानेको होइन- ढुक्क रहौं, मुलुक बन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
सरिता गिरीलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने तयारी, सांसद पद पनि नरहने
एमसिसी पास भए अमेरिकी सेना आउने कुरा निराधार : प्रवक्ता शर्मा